Fanalam-baraka: hametraka fitoriana ny Hafari Malagasy - ewa.mg
News - Fanalam-baraka: hametraka fitoriana ny Hafari Malagasy
« Manoloana ny fanaratsiana sy fanalam-baraka natao anay tamin’ny gazety momba ny filazana fa nibodo tanin’olona an-keriny mirefy 371 ha tany Andranomena Analavory ny Hafari Malagasy dia tsy hipetra-potsiny amin’izao izahay fa hitondra ny raharaha eny anivon’ny fitsarana », hoy ny filohan’ny Hafari Malagasy, Rafanomezantsoa Jean Nirina nandritra ny valandresaka ho an’ny mpanao gazety, omaly momba ity raharaha ity. Nohamafisiny hatrany fa lainga sy tsaho iniana ataona mpanambola iray malaza eto an-drenivohitra io mba hanenjehana sy hanaratsiana azy ireo ary misy olona voakarama hamoaka izany fanalam-baraka izany. Tsy misy tanin’ny Hafari any Andranomena Analavory ary tamin’ny fotoana nilazan’ireo mpanely tsaho dia mbola tany am-ponja ny filohan’ny Hafari, araka ny nambarany. Nilaza izy fa miezaka mangina izahay satria fantatray fa misy fanjakana mijoro ara-dalàna eto ary tsy misy ambonin’ny lalàna. Miantraika mivantana amin’ny fiainan’olona ny fanalam-baraka toy izao ary tonga hatrany amin’ny resaka hoe hala-tsonia mihitsy aza izany. Nisy ny fivoriana niarahan’ny mpikambana rehetra, ny zoma teo ka tamin’izany no nandraisan’izy ireo fanapahan-kevitra fa tsy hipetra-potsiny amin’izao raharaha izao. Misy olona ambadik’izao ka ny Hafari no ataony fitaovana, hoy izy.
L’article Fanalam-baraka: hametraka fitoriana ny Hafari Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Fisorohana fahasemporana :: Omena tombondahiny ireo marary any amin’ny faritra
Tonga teny amin’ny seranam-piaramanidina teny Ivato, omaly tolak’andro, ny fiaramanidina avy any Shina, nitondra ny ampahany faharoan’ny fitaovana famokarana rivotra madio hamonjena an’ireo mararin’ny valanaretina Covid-19 tojo fahasemporana. Miisa dimy amby sivifolo sy arivo ireo fitaovana ireo, izay aparitaka amin’ireo faritra misy ny trangan’aretina. « Miankina amin’ny isan’ireo marary sy ny fisiana tranga misy fahasarotana no hitsinjarana azy. Mety ho betsaka kokoa izany any amin’ireo faritra hitomboan’ny fiparitahan’ny valanaretina », hoy ny minisitry ny Fahasalamam-bahoaka, Ahmad Ahmad, omaly, teny Ivato. « Na izany aza hahazo koa ny faritra misy fidinany ny tarehimarika toa ny eto Analamanga », hoy izy. Nomarihin’ny jeneraly Andriankaja Elack, mpandrindra ny Ivon-toerana fibaikoana ny ady amin’ny valanaretina Covid-19 kosa fa « hodinihina hoe aiza ireo toerana ireo ». L’article Fisorohana fahasemporana :: Omena tombondahiny ireo marary any amin’ny faritra est apparu en premier sur AoRaha.
Razana teny an-tanimbary :: Mpamboly hita faty nahitana diam-bala
Tamin’ny 6 ora hariva no hita teny an-tanimbary ny vatana mangatsikan’ny lehilahy iray, mpamboly, tany Ambaravaranala ao amin’ ny kaominina Fierenana-Tsiroanomandidy, tamin’ny sabotsy lasa teo. Loakan’ny bala ny vatany sy teo amin’ny lohany. Tsy fantatra ny tena anton’ny namono­ana azy. Olona sendra nandalo no nampandre ny mponina tao Ambaravaranala, toerana nahitana ny razana. Niantso ny mpitsabo avy any Mahatsinjo sy mpitandrofilaminana ny havan’ny maty taorian’izay. Balana basim-borona no nitifirana an’ity lehilahy ity. “Nilaza ho tsy mahalala na inona na inona mety ho nitarika tamin’izao famonoana azy izao ny havany. Avy any an-tsaha ilay lehilahy no io hita faty io. Ahiana ho lonilony amin’ny fiarahamonina anefa no nitarika tamin’ny vono olona”, hoy ireo zandary tonga tany an-toerana nijery ny razana. Mandeha ny fanadihadiana. L’article Razana teny an-tanimbary :: Mpamboly hita faty nahitana diam-bala est apparu en premier sur AoRaha.